အောင်မြင်နေတယ်လို့ မခံယူထားဘူး…. ရဲရင့်အောင် - Shape Journal
Home A Artist အောင်မြင်နေတယ်လို့ မခံယူထားဘူး…. ရဲရင့်အောင်
အောင်မြင်နေတယ်လို့ မခံယူထားဘူး…. ရဲရင့်အောင်
ပရိသတ်တွေကတော့ ကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်တာကိုသဘောကျတယ်… ရဲရင့်အောင်
ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေကတော့ သရုပ်ဆောင်တာသဘော ကျတယ်ပေါ့နော်။ ပထမဆုံးကား မှာသရုပ်ဆောင်တာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ပထမဆုံး ကျူစီ Game၊ Waiting for you အပါအ၀င်သုံးကားပေါ့နော်။ အဒီသုံးကားမှာ အဆိုတော်ရဲရင့်အောင်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေသဘောကျတယ်လို့ ပြောရင်တော့ ကျွန်တော်ငြင်းလည်းမငြင်းသလိုလက်လည်းမခံပါဘူး။ နောက်ဇာတ်ကားတွေလည်း ဆက်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ကားနဲ့တစ်ကားမတူ အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒီသီချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့ဆီမှာနေရာဝင်ယူတဲ့အလုပ်မျိုး ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။
ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုပီပီပြင်ပြင် လုပ်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုပါပဲ။ ကျွန်တော်အခုအချိန်အထိတော့အောင် မြင်နေတယ်လို့မခံယူထားဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတွေ ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ပြဖို့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ မလုပ်နိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။
ငွေကြေးကို ထည့်စဉ်းစား ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အလုပ်ကအဓိကပါပဲ… ရဲရင့်အောင်
အလုပ်နဲ့ငွေကြေးကိုပွင့်ပွင့်လင်း လင်းပြောရရင် ကျွန်တော့်မှာငွေကြေးနဲ့အလုပ်ကို အရမ်းကြီးခွဲခြား လို့မရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ငွေကြေးကိုထည့်စဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ကာလမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် အလုပ်ကအဓိကပါပဲ။ အနုပညာကြေးတို့၊ ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ပေးမယ်တို့မလုပ်ဘူး။ ကျွန်တော် သီချင်းလည်းမရေးဘူး။ ပိုက်ဆံရတယ်ဆိုပြီး သီချင်းရေးတာဖြစ်ဖြစ် ပရိသတ်ဆီရောက်သွားတာတစ်ခုခုထိခိုက်ခံစားရတာမျိုး အခုမလုပ်တော့သလို နောက်ဘယ် တော့မှ ထပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။